Axmed Madoobe “Doorashadan wey ka dhaqaalo badan tahay, weyna ka lagdan adag tahay kuwii hore” ! | kowtharmedia.com
Home WARAR Axmed Madoobe “Doorashadan wey ka dhaqaalo badan tahay, weyna ka lagdan adag tahay kuwii hore” !
Axmed Madoobe “Doorashadan wey ka dhaqaalo badan tahay, weyna ka lagdan adag tahay kuwii hore” !
Jan 02, 2017WARAR
Axmed Madoobe, ayaa kula dardaarmay xildhibaanada labada aqal inaysan dooran musharax ay lacag ka qaateen, balse ummada Soomaaliyeed u dooraan musharax dhibaatada ka saari kara.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa tilmaamay haddii hogaanka Soomaalida lagu doortaa dhaqaalahiisa ay adkaan doonto inuu wax u qabtaa bulshada Soomaaliyeed ee uu masuulka ka yahay.
Sidoo kale wuxuu si cad u sheegay in musharaxa dhaqaalihiisa ku soo baxaa, inuu ka fakarayo sidii uu usoo ceshan lahaa lacagtiisa, laakiin bulshada Soomaaliyeed ay ka sugeyso waxqabad muuqda.
“Baarlamaanka waxaan leeyahay raadiya dad isku wadi karaya xaaladan adag oo aqoon leh, kuna doorta aqoonta iyo kartida uu leeyahay, arinta labaad doorashadaan doorashadii hore wey ka kulushahay, wey ka lacag badan tahay, weyna ka lagdin badan tahay”.
“Waxaan rabaa inaan u sheego xildhibaanada, yuu noqonin codka qofkii lacag heystaa inaad la eegtaan, ee ha noqoto in qofka lala fariisto, in la qiimeeyo oo la yiraahdo qofkan muxuu soo kordhin karaa, muxuuse qaban doonaa, ha ahaado mid cusub, mid horey u joogi jiray iyo mid hadda joogaba, waxay u baahan tahay in qofka awoodiisa miisaan saartaan”ayuu yiri Axmed Madoobe.
Doorashada sanadkaan ayaa waxaa ku loolamaya dad xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka Soomaaliya iyo dad ku cusub siyaasadda Soomaaliya ama kusoo biiray dhawaanahaan.
Previous PostDAAWO MUUQAAL: Qatarahii soo wajahay Gantaalihii Kuuba: Marakenka iyo Taliyihiisii Ciidanka! Next PostDowladda Sacuudiga oo dhameestirtay qorshe lagu shaqaaleesiinayo Muwaadiniin Soomaaliyeed!